शब्दकोश: घुम्ने मेचका सुहाउँदा मान्छे
घुम्ने मेचका सुहाउँदा मान्छे
लेख्‍नेहरूले लेख्‍न सक्थे, यो देश -
धुपी, सल्ला र हिमालहरूको देश,
भूपी, हल्ला र रिमालहरूको देश ।
तर सम्झिनेहरूले कवि भूपी शेरचनलाई स्मृतिमा रेसारेसा केलाउँदा उनका विभिन्न पाटो खुल्दै जान्छन्, चर्चाको क्रम 'हल्ला'मा गएर टुङ्गिइहाल्दैन । हल्लाको गुप्त तहबाट पार भएर यथार्थका फग्लेटाहरू स्मृतिको झ्यालमा प्रकट हुन थाल्छन् ।
हामी, मेरो चोक, यो हल्लैहल्लाको देश हो लगायतका शक्तिशाली कवितामा बाँचेका भूपीबारे अनेक रङ्गीन प्रसङ्ग उनीसँग उठबस गर्नेहरूको मानसपटलमा आलै छ । भूपीका समकालीन तथा अन्तरङ्ग मित्र कवि तथा गीतकार रत्‍नशमसेर थापाको सम्झनामा भूपी रङ्गीन मिजासका मान्छे हुन् । उतिबेलाको काठमाडौंमा एकातिर नारायणगोपाल, भूपी र रत्नहरूको गीताङ्गे जमघट हुन्थ्यो भने उता कृष्णभक्त, द्वारिका श्रेष्ठ, मोहन कोइरालाहरूसँग मिसिँदा उनै भूपी र रत्न साहित्यिक रौनकमा धुवाँदार बहस गर्थे । भीमदर्शन रोका, शङ्कर लामिछाने र मोहनहिमांशु थापासँगको 'यारोँ दोस्ती' पनि कम थिएन । मिलनसार स्वभावका थिए भूपी र असाध्यै मीठो गरी बोल्थे । बोली नै पिच्छे ठट्टा गरिरहनुपर्ने ।
गर्मी महिनाको एक दिन दिउँसो २ बजेतिर न्युरोडबाट टुँडिखेलतिर आउँदै थिए भूपी, नारायणगोपाल र रत्‍न । हिँड्दै गर्दा भूपीले रत्‍नलाई सोधे, 'कत्तिको गर्मी भा’छ ?'
- 'गर्मीको टाइममा त गर्मी भइहाल्छ नि !', सोझै पारामा रत्‍नले जवाफ दिए ।
- 'होइन, मलाई भन्दा तँलाई अलि गर्मी भा'होला !', भूपीले अझै पछ्याउन छाडेनन् ।
- 'किन !?', मौसमको गर्मीभन्दा साथीको प्रश्नको पर्राले पिरोलिएका रत्‍न जिल्लिए ।
- 'किनभने मभन्दा तँ अलि सूर्यको नजिक छस् नि त अग्लो भएकोले,' भूपीले ठट्टा घोलिहाले । सुनेर नारायणगोपाल र रत्‍न हाँसेकौ हाँस्यै भए । हुन पनि भूपीभन्दा रत्‍नशमसेर अलि अग्ला थिए, अग्ला भएकाले घामको तापले पनि उनैलाई बढ्ता छुने भनेर ठट्टा गरेका थिए भूपीले ।
उतिबेलाको काठमाडौँमा रश्मि रेष्टुराँ, पारस होटल र इन्दिरा रेष्टुराँमध्ये कुनै एकमा साथीहरूसँग अड्डा जमाई 'महफिल' जमाउने भूपी हँसीमजाकमा जस्तै पिउने कुरामा पनि उस्ताद थिए । त्यस्तो बेला हातमा गिलास उठाएर चियर्स गर्दै उनी भनिरहेका हुन्थे-
'भोलिदेखि म नपिउने विचारमा छु,
तर आजसम्म म बारमा छु ।'
त्यही अधिक मदिरापान र स्वास्थ्यप्रति ध्यान नदिने बानीका कारण नै असमयमै एउटा होनहार कवि र असल मित्र गुमाउनुपरेकोमा चुकचुकाउँछन् रत्‍नशमसेर । कतिसम्म भने, बिरामी भई अक्सिजन सिलिन्डर लगाएर बेडमा सुतिरहेको बेला पनि जुरुक्क उठेर तुइँतुइँ चुरोट खान पछि पर्दैनथे भूपी । स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गरे पनि मित्रतालाई कहिल्यै ठट्टामा लिएनन् भूपीले । खाने र पिउने आफ्नै ठाउँमा रह्यो, आत्मीयता आफ्नै ठाउँमा अटुट रहिरह्यो । साथी भनेपछि मरिमेट्ने भूपी कतै जमघट हुँदा खानपानमा निकै खुलेर खर्च गर्थे । 'उनको त्यही उदार मन र खर्चिलो स्वभावलाई त्यसबेला कतिपय सँगैका साथीभाइदेखि सरकारी उच्च ओहदामा भएकाहरूसम्मले कमजोरीका रूपमा लिएर फाइदा उठाउनुसम्म उठाए', रत्‍न पुराना दिनमा फर्किए ।
मार्क्सवादी झुकावबाट 'नयाँ झ्याउरे' काव्यकृतिमा भूपेन्द्रमान र्सवहाराको नाममा लेखन थाल्ने भूपी विस्तारै कोमलता र स्वतन्त्र गद्यमा फैलिँदै गए । मुस्ताङ जिल्लाको थाक टुकुचेमा जन्मिएका धुरन्धर व्यापारी परिवारका सदस्य उनी कसरी कविताको क्षेत्रमा हेलिन आए भन्नेबारेमा चाहिँ उनको सम्बन्धमा चासो राख्नेहरूले आजसम्म पनि अचम्म मान्ने गरेको पाइन्छ । नभन्दै परिवारको व्यापारिक विरासतलाई बेवास्ता गरेर भूपी कविता लेख्नमै एकोहोरिए, साहित्यिक भीडमै लुटपुटिए । थोरै लेखेर गहकिलो चिज दिने भूपीका बारेमा धेरै नकारात्मक टीका-टिप्पणी पनि भएका छन् । खासगरी पञ्चायतकालमा उनी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ हुँदा उनले त्यस बेला आफ्नै समकालीन तथा बुज्रुकहरूको माझमा आलोचना खेपे । कम्युनिष्ट मान्छे राजावादी भयो भन्नेसम्मको आक्षेप आइलाग्यो । लगभग उनी भीडबाट एक्ला नै भए ।
उनको निधन भएपछि पनि शवयात्रा र घाटमा मलामहरू ज्यादै थोरै सहभागी थिए भनेर चर्चा चल्ने गरेको छ । यसको कारण कतिपयले उनी पछिल्लो समयमा आएर एकेडेमीको सदस्य हुनु र साहित्यिक जमातबाट टाढिँदै जानुलाई ठान्छन् । यस कुरामा भूपीको सङ्गतमा एक समय राम्रैगरी झ्याम्मिएका साहित्यकार कृष्णप्रसाद पराजुलीका अनुसार, मृत्युबारे खबर नपाएर पनि मान्छेहरू मलाममा भेला नभएको हुन सक्छ । आफू नपिउने भएकाले पिउनेहरूको जमघटमा रत्तिन नसक्दा भूपी जस्ता प्रतिभाशाली र रसिक कविसँग अन्तरङ्ग घुलमिल गर्न नपाएकोमा थकथकी उत्तिकै छ पराजुलीमा । तर रत्‍नशमसेरका अनुसार, भूपी एकेडेमीको सदस्य हुँदा मान्छेहरूले आह्रिस गर्नु आपत्ति जनाउनुको कुनै तुक छैन । 'भूपी आफ्नो खुबीले प्राज्ञ भए, तर हाम्रो समाजमा कोही अलिकति माथि उठ्न खोज्यो कि त त्यसलाई नकारात्मक कुरासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ,' रत्‍न भन्छन्, त्यही दृष्टिकोणको सिकार भएका भूपी पहिले खुवाउँदा-पियाउँदा सबैको हाइहाइ भए पनि पछि खर्च गर्न छाडेपछि उनै भूपी आँखाको कसिंगर भए ।'
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, March 15, 2012
Chaitanya March 23, 2012
भूपिको बारेमा धेरै रमाइला प्रसंगहरु भरिएको बडो राम्रो लाग्यो यो लेख!
तिम्रो हरामखोरको डायरी
तरबार र धार